Izindaba - HW Caravan Interior Paneling
I-Caravan Interior Panelingi-plywood encane embozwe ngefilimu yokuhlobisa ukuze isetshenziswe emotweni yezokungcebeleka, imboni yezokuthutha kanye nezokuthutha.I-Caravan Interior Paneling iyatholakala ezinhlobonhlobo zokuqedwa ezinamatheyipu azinamathelayo afanayo ukuze amboze amalunga.
Amaphaneli angasindi aseqedwe ngaphambilini olayini nokwakhiwa kwezingxenye zefenisha zamakharavani, izindlu zezimoto, izindawo zokukhempa, amabhasi nezindlu ezithuthwayo.
I-Wood Raw Material - Poplar waseShayina
Ukuminyana - isilinganiso 560-650kg/m3
Ikilasi - Ukhuni oluqinile, oluqinile-luqinile
I-Glue Bond - Ingamelani Nomswakama Ngaphakathi
Ukukhishwa kweGlue Formaldehyde - E1
Okuqukethwe Umswakama - 8% -13%
Ubuso Nemuva - Ama-EV veneers aphinde aqanjwa kabusha ama-veneers laminated plywood, leli elinye lamabhodi ethu efenisha athengiswa kakhulu.Ngokuvamile sincoma ikhasimende le-poplar core, i-combi core kanye ne-eulyptus core ukulwela ukuthola imikhiqizo yekhwalithi ephezulu.izinhlobo ezingaphezulu zingaba uchungechunge oluningi oluhlukene, njenge-oki, i-teak, i-poplar, i-cherry njalonjalo, futhi sisebenza nezigayo ezinkulu ezimbalwa zomkhiqizi we-recon veneers we-multichoice.futhi lo mkhiqizo ulungele ibanga lefenisha kanye ne-counter top material ukukhetha kokuqala.
Nakuba i-Caravan ingamaphaneli amelana nomswakama, asincomi ukuthi amaphaneli afakwe ezinhlelweni ezingaphansi kokuthintwa kwamanzi okuqondile isikhathi eside.
Okunamathelayo kwe-Wallboard kufanele kufakwe endaweni eyakhiwe noma ekhona kakade ebuhlalu obuqhubekayo ngokuvumelana nesincomo sabakhiqizi.Izingodo ezintsha zohlaka kufanele zibe nomswakama ongaphansi kwama-24%.Ukulungiswa kwezinzipho ngezikhonkwane zephaneli ezinhle ezigudluzwe ngobumnene endaweni yokunamathisela kungase kudingeke kwezinye izinto ezifakwayo.Ukufaniswa kombala ngokucophelela kwamakhanda ephini kungase kudingeke noma kungadingeki kuye ngephethini yeplying esetshenzisiwe.
I-Wallboard jointing extrusions epulasitiki noma i-aluminium ngokuvamile isetshenziswa.I-HW inikeza i-Ezy-Press izingcezu ezimbili ze-H-jointing extrusion ezingalingana 2.4-3.6mm Caravan panels ukuze zifakwe kalula.
Ukuphatha kanye Nesitoreji:
I-Plywoodumkhiqizo wemvelo ongathintwa izinguquko ezimweni zezulu ezizungezile, okubangela ukuthi amashidi ayisicaba ngaphambilini akhothame noma asonte.Zonke izinyathelo zokuphepha zithathwa ukuze kuncishiswe lo mphumela, kodwa uma i-plywood isiphumile endlini yethu yokugcina impahla singaqinisekisa amashidi okukhumbuza phansi.Lokhu kubaluleke kakhulu lapho iminyango yekhishi/yekhabhinethi emi mahhala ithinteka khona.
Isikhathi sokuthumela: Jan-17-2022